यी युवतीलाई अँगालो हालेर सुताउने अचम्मको जागिर ! १ (घण्टाकै ८ हजार तलब) - NaulooDhun
June 6, 2021 adminLeaveaComment on यी युवतीलाई अँगालो हालेर सुताउने अचम्मको जागिर ! १ (घण्टाकै ८ हजार तलब)
झट्ट यो खबरसुन्दा तपाइलाई चकित पार्ने छ । जसले हरेकलाई सुन्दैमा पनि चम्म पार्छ । संसारमा कस्ता कस्ता जागिरहरु हुदो रहेछन् । एउटा यस्तै जागिरको अवशर अमेरिकामा आएको छ । यो जागिर अमेरिकाकी एकजना महिलाले ल्याएकी हुन् । उनले अंगालो मारेर सुताएको एक घण्टाको करिब ८ हजार रुपैया दिन्छिन् । पछिल्लो समय ती महिला इन्टरनेटमा भाइरल बनिरहेकी छन् ।अनि यो खवर पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल भएको छ ।,”उनले आफ्ना ग्राहकहरुलाई ओछ्यानमा केवल अंकमाल गरेर सँगै सुत्छिन् । निकै प्रेमभावमा अंकमाल गरेर सुताएबापत उनले प्रतिघण्टा ८० डलर अर्थात् झण्डै ८ हजार शुल्क लिन्छिन् । अमेरिकाको केनजस सहरकी ती महिलाको नाम मेरी हो ।
पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोलाराती मोबाईल प्रयोग गर्दा हुने हानीहरु छोटकरीमा
सुत्ने बेला मोबाईल फोनको प्रयोग गर्नाले दिमागलाई धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ । जसका कारण मेमोरी लसको समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।अंधेरोमा मोबाईल प्रयोग गर्नाले आँखामा धेरै प्रेशर पर्छ । जसले गर्दा आँखा रातो र कमजोर हुने समस्या हुन सक्छ । यसले आँखाको समस्या बढ्ने गर्छ ।
राउटेनी युवती माथि होटलमा गरेको दुर्व्यवहार काण्ड लाईभ भिडियो सार्वजनिक
बिहानै कस्ले आगो लगायो घरमा राजेन्द्र महतोलाइ जनताले दरो रामधुलाई गरे सक्दो सेयर गर्नु यो भीडियो (भिडियो सहित)